Itoophiyaan nama haasaa jibbiinsaafi odeeffannoo sobaa tamsaase hidhaa hanga waggaa 5n adabuuf oroict.com Solutions
Itoophiyaan nama haasaa jibbiinsaafi odeeffannoo sobaa tamsaase hidhaa hanga waggaa 5n adabuuf oroict.com Solutions oroict.com Solutions
Itoophiyaa keessatti walitti bu’iinsi sababa oduu sobaatin uumamuun lubbuu namootaafi qabeenya irratti miidhaan ga’aa jiraachuu Ministira Mummee Abiy Ahmad dabalatee angawootni biyyatti yeroo garaagaraatti dubbataa turan.
Kanaafis mootummaan Dr Abiy Ahmad haasaa jibbiinsaafi oduu sobaa ittisuuf seera baasun barbaachisaa ta’uusaa himuun labsii qopheessuu erga eegalee bubbuleera.
Waltajjiiwwan qopheessuunis namoota dhimmicharratti qorannoo taasisan, hooggantoota dhaabbilee siyaasaa, waldaalee siiviilii fi gaazexeesitoota waliin irratti mari’atamuusaa odeeffannoon waajjira ministira muummeetii bahe ni hima.
Guyyaa har’aas miseensotni mana maree bakka bu’oota uummataa 300 ol ta’an wixinee labsicharratti yaada isaanii erga kennanii booda gara koree dhaabbii dhimma seeraa, haqaafi dimokiraasiitti dabarsaniiru.
Wixineen labsichaa maal jedha?
Wixineen labsii haasaa jibbiinsaafi oduu sobaa to’achuuf qophiirra jiru mirgoota bu’uuraa lammiilee, nageenya biyyaa fi uummataa eeguf akkasumas dimokiraasii kunuunsuuf faayidaa akka qabu hima.
Wixineen keeyyatawwan kudhan qabu kun kaayyoon isaa namootni mirga yaada isaanii bilisaan ibsachuutti yeroo fayyadaman haasaawwan walitti bu’iinsa yookin hookkara uuman akkasumas saboota, amantaalee, saala akkasumas miidhama qaamaa bu’uura godhachuun nama dhuunfaas ta’e garee irratti jibba yookin loogii akka hin babal’isne kan dhorkuu akka ta’e hima.
Haaluma kanaan “haasaa jibbiinsaa akkasumas oduu sobaa gama broodkaastiingii, maxxansaan yookin miidiyaalee hawwaasummaa irratti barreeffamaan, suuraan, sagaleen yookin viidiyoon tamsaasuun dhorkaadha” jedha.
Haa ta’u malee haasaan qaama barnootaa fi qorannoo saayinsii ta’e, oduu fi qeeqa siyaasaa yoo ta’e, hojii aartii yoo ta’e akkasumas qaama barnoota amantaa yoo ta’e akka haasaa jibbiinsaa yookin oduu sobaatti hin ilaalamu jedha wiixineen labsii kun.
Dabalataan namni haasaa sobaa haasa’e yookin tamsaase tokko dhugummaa odeeffannoo sanaa mirkaneessuuf gahee irraa eeggamu yoo bahate yookan ammoo haasaan sun gabaasa/oduu osoo hin taane qeeqa siyaasaa yoo ta’e haasaan sun akka haasaa sobaatti fudhatamee akka hin dhorkamne wixineen labsii haasaa jibbiinsaa fi oduu sobaa manni marichaa irratti mari’ate hima.
Adabbiiwwan haasaa jibbiinsaa fi oduu sobaa tamsaasuun dhufan kan himu keeyyatni torbaffaa wixinee labsichaa namni haasaa jibbiinsaa gama broodkaastin, maxxansaan yookin miidiyaalee hawwaasummaa irratti barreeffamaan, suuraan, sagaleen yookin viidiyoon tamsaase kamiyyuu hidhaa salphaa hanga waggaa sadi fi maallaqa birrii 100,000 hin caallen akka adabamu hima.
Sababa haasaa jibbiinsaa tamsa’en nama dhuunfaa yookin garee irratti haleellaan yoo raawwatame adabbiin hidhaa cimaa hanga waggaa shanii ta’u irratti fudhatama jedha.
Dabalataan yakki haasaa jibbiinsaa yookin oduu sobaa tamsaasu toora miidiyaa hawwaasaa hordoftoota 5,000 ol qabun, tajaajila brodkaastin yookin ammo maxxansaan yoo raawwatame adabichi hidhaa salphaa hanga waggaa sadi gahu yookin adabbii maallaqaa birrii 100,000 hin caalle adabama.
Wixineen kun dhaabbatni tajaajila miidiyaa hawwaasummaa kennu kamiyyu haasaa jibbiinsaa yookin oduu sobaa ilaalchisee eerun yoo isa qaqqabe hatattamaan toora miidiyaa isaarraa buusuu/haquu qabas jedha.
Dhumarrattis Abbaan Taayitaa Broodkaastii oduu sobaa ilaalchisuun akkasumas Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa haasaa jibbiinsaa ilaalchisuun watajjiilee qopheessun hubannoo akka uuman wixineen labsii haasaa jibbiinsaa fi oduu sobaa to’achuuf qophaa’e hima.
Yaada Miseensota Mana Maree…
Miseensotni mana maree bakka bu’oota uummataa wixinee labsii haasaa jibbiinsaa fi oduu sobaa to’achuuf qophaa’e irratti yaada kennan baay’eensaani barbaachisummaa labsichaa deeggaran.
“Labsii yeroosaa eegaatedha” jechuunis dubbatan.
Haa ta’u malee “barsiifatni amantaa, amantaalee biroo xiqqeessuun kennamu fi amantaalee gidduutti walitti bu’iinsa uumu akka haasaa jibbinsaatti fudhatamuu qaba” jedhan miseensi mana marichaa tokko.
Qeeqni siyaasaa sabootaa fi amataalee walitti buusus dhorkamuu akka qabu miseensootni mana marichaa yaada kennaniiru.
Dhimmi miseensotni mana marichaa irra deddeebiin kaasan inni biraan lakkoofsa hordoftoota miidiyaalee hawwaasummaati.
Haasaa jibbiinsaa yookin oduu sobaa tamsaasanii itti gaafatamuf dirqama hordoftoota 5,000 fi isaa ol qabaachun hin barbaachisu, lakkoofsa hordoftootaa osoo hin taane miidhaa haasaan sun qaqqabsiisetu ilaalamuu qaba jechuunis yaada kennaniiru.
Dubbisi | Read Beeksisa Gita Hojii Banaa - Dhaabbata Qubee Technologies baase
Yaadni wixinee labsii haasaa jibbiinsaa fi oduu sobaa to’achuuf qophaa’e irratti miseensota mana maree bakka bu’oota uummataan kenname inni biraan immo “labsichi miidiyaalee qofa osoo hin taane namoota waltajjiilee garaagaraa irratti haasaa jibbiinsaa haasa’an yaa ilaallatu” kan jedhu dha.
Manni marichaa yaadawwan kunnen erga irratti kennee booda wixinee labsii haasaa jibbiinsaa fi oduu sobaa to’achuuf qophaa’e gara koree dhaabbii dhimma seeraa, haqaa fi dimokiraasitti ergeera.
Gabaasni kan: BBC Afaan Oromooti
Itoophiyaan Seera Adaba Oduu Sobaa baafte, Itoophiyaan Seeraa Haasaa Jibbiinsaa baafte